स्पेनी राहदानीका लागि भिसा मुक्त देशहरू
अक्टोबर 5, 2021 एन्टिका कुमारी स्पेन, यात्रा, भिसा
एक स्पेनिश पासपोर्ट धारकहरु लाई १ free188 देशहरुमा भिसामुक्त यात्रा छ, यो विश्व को शीर्ष पाँच पासपोर्ट एक बनाउँछ। स्पेनका नागरिकहरूका लागि भिसा-मुक्त यात्रा यदि तपाईंसँग स्पेनी पासपोर्ट छ भने, तपाईं यी देशहरू बिना नै हेर्न सक्नुहुनेछ
म्याड्रिड मा जागिर कसरी प्राप्त गर्ने?
अगस्ट 26, 2021 मैत्री झा जब, स्पेन
म्याड्रिड मा रोजगार कसरी खोज्ने? तपाइँ केहि उपयोगी काम लिस्टिंग वेबसाइटहरु वरपर हेर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। गुगल: जब तपाइँ जागिर शिकार शुरू गर्नुहुन्छ, एक साधारण गुगल खोज एक राम्रो सुरुवात हुन सक्छ। काम को प्रकार को लागी हेर्नुहोस्
AliExpress बाट किन्नको लागि शीर्ष चीजहरू
7 सक्छ, 2021 मैत्री झा चिनियाँ, स्पेन, सामान किन्नुहोस्, उपयोगी लिंकहरू
AliExpress एक धेरै प्रख्यात अनलाइन शपिंग वेबसाईटहरु मध्ये एक भएको छ, उल्लेखनीय कम मूल्यहरुमा आइटम को एक विस्तृत श्रृंखला को प्रस्ताव। योसँग कुनै पनि अन्य अनलाइन शपिंग वेबसाइटको सब भन्दा ठूलो उत्पादन चयन छ। प्रत्येक कोटिमा सयौं हुन्छन्
स्पेनमा भाँडा र आवास
डिसेम्बर 14, 2020 एन्टिका कुमारी आवास, स्पेन
स्पेनमा विभिन्न प्रकारका घरहरू छन् जुन दुबै अल्पकालीन र दीर्घकालीन लिजहरू हुन्। एयरबएनबी, बुकिंग, र युनिप्लेसहरू जस्ता वेबसाइटहरूको उदयसँग पछिल्लाले हालका बर्षहरूमा प्रमुखता प्राप्त गरे। आवास र भाँडामा राम्रो ठाउँ खोज्दै
स्पेनमा शरणको लागि कसरी आवेदन दिने: स्पेनमा शरण नीति
सेप्टेम्बर 28, 2020 शुभम शर्मा शरणार्थीहरू, स्पेन
यदि तपाईं स्पेन वा स्पेन बाहिर हुनुहुन्छ भने, तपाईं शरण दिन वा सुरक्षाको लागि दुबै केसमा आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ केहि चीजहरू वा चरणहरू छन् जुन तपाईले आश्रयको लागि आवेदन दिन अनुसरण गर्नुपर्छ। तर पहिलो चरणमा तपाईलाई चाहिन्छ
एक स्पेन शेन्जेन भिसा प्राप्त गर्नुहोस् !! यी चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् !!
अप्रिल 29, 2020 करुणा चन्दना स्पेन, भिसा
यदि तपाईं स्पेन भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईंलाई भिसा चाहिन्छ। हामी हेर्नेछौं कि तपाईं कसरी स्पेनको भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। यद्यपि भिसाका बिभिन्न प्रकार छन् र एक अनुसार छनौट गर्न सकिन्छ। तपाईं लागू गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो
स्पेनमा कसरी काम पाउने? यहाँ जान्नुहोस् !!
अप्रिल 11, 2020 करुणा चन्दना जब, स्पेन
स्पेन एउटा आकर्षक ठाउँ हो। यसले यसको स्वादिष्ट र सर्वव्यापी मदिराले तपाईंलाई तान्छ। भूमध्यसागरको धूपको आनन्द लिन सजिलो छ, काम खोज्दै, र यहाँ बसाइँ सर्दै। यदि कोही दुई वर्ष स्पेनमा बस्ने र गरेको छ भने
कसरी र किन स्पेनको विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने?
मार्च 13, 2020 एन्टिका कुमारी स्पेन, अध्ययन
स्पेनमा, शिक्षा प्रबन्धक निकाय "शिक्षा मन्त्रालय" हो। स्पेनमा नियन्त्रणका लागि बनाइएको “शिक्षाको कानून”। यो मुख्यतया स्पेनको सरकारले समर्थन गरेको छ। स्पेन मा विश्वविद्यालय मा अध्ययन धेरै difficult कार्य छैन। यहाँ
स्पेनमा राम्रो बैंकहरू र वित्त सेवाहरू
मार्च 12, 2020 एन्टिका कुमारी पैसा, स्पेन
स्पेनमा बैंकहरूको अवलोकन स्पेनिश केन्द्रीय मौद्रिक क्षेत्राधिकार बान्को दि एस्पाना हो, जुन स्पेनमा बैंकहरूको राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको रूपमा काम गर्दछ। १ Mad1782२ मा म्याड्रिडमा स्थापित, स्पेनको केन्द्रीय बैंक हाल युरोपियन प्रणालीको सदस्य हो